Wasiirka Ciyaaraha Oo Shahaadooyin Guddoon siiyay arday dhamaysatay xirfadaha farsamadda Gacanta | Somaliland.Org
Wasiirka Ciyaaraha Oo Shahaadooyin Guddoon siiyay arday dhamaysatay xirfadaha farsamadda Gacanta
March 28, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)-Wasiirka Wasaarada Dhalinyarada, Ciyaaraha iyo Dhaqanka ee Somaliland Mudane Cali Siciid Raygal ayaa maanta shahaadooyin gudoonsiiyay arday dhamaysatay xirfadaha aasaasiga ah iyo koob ay ku guulaysteen koox kubada cagta u ciyaarta Dugsiga Panorama Skill Training Center taas oo lagu qabtay Huteelka Imperial ee Caasimada Hargaysa.
Waxa kale oo Xafladaasi ka qayb galay oo kale Agaasimaha Guud ee Wasaarada shaqadda iyo arrimaha bulshadda iyo madax ka tirsan Wasaarada Waxbarashada gaar ahaan waaxda Waxbarashada dadban.
Gudoomiyaha Panorama Skill Training Khadan Ibraahim oo halkaasi ka hadashay ayaa ka warbixisay waxyaabihii ay ardaydani barteen waxaanay xustay in iyagoo ka duulaya shaqo la’aanta haysata dhalinyarada ay u abuureen waxyaabo ay kaga mashquulaan balwadaha xun ee dhaawacaya mustaqbalkooda.
Gudoomiyaha Panorama Skill waxa ay sheegtay in qaybta kale ee shahaadooyinka la gudoonsiinayaa ay kasbadeen xirfadaha aasaasiga ah ee ay ku maarayn lahaayeen noloshooda iyadoo intaas ku dartay in dugsigan oo ay aasaaseen sannadkii 2003-dii ay ka baxeen laba iyo toban dufcadood.
Wasiirka Wasaarada Dhalinyarada,Ciyaaraha iyo Dhaqanka Mudane Cali Siciid Raygal oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay talaabadan uu dugsiga Panaroma Skill Traning uu u sameeyay dhalinyaradan aqoonta u leh ciyaaraha oo wax badan ka taraya sidii ay nolosha bulshadooda ugu yeelan lahaayeen maqaam wanaagsan.
Wasiirku waxa kale oo uu tilmaamay inay Xukuumad ahaan mar walba dhiirigalinayaan cid kastoo dhalinyarada ka taageerta inay xirfadooda kor u qaadaan si ay uga badbaadaan Tahriibta,Budhcadnimada,Balwadaha iyo wixii la mid ah.
Mudane Cali Siciid Raygal waxa uu u soo jeediyay dhalinyarada tababarkan qaatay in aqoontii ay dugsigan ka kasbadeen ay ku raadsadaan shaqooyin ay kula soo baxaan nolol maalmeedkooda.
Waxaa kale oo halkaasi ka hadlay Agaasimaha guud ee wasaarada Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Baashe Yuusuf Axmed iyo mas’uuliyiin kale.
Gaba gabadii Waxa uu Wasiirka Dhalinyarada,Ciyaaraha iyo Dhaqanku halkaasi shahaadooyin iyo koob ku gudoonsiinaya ardaydii ka baxday dugsigan iyo Ciyaartoygii ku guulaystay koobkaas.
Previous PostWasiirka Maaliyadda oo kormeer Kedis ah ku tegay goobaha ilaha dhaqaalaha ee magaaladda BerberaNext PostCiidanka Ilaaladda Xeebaha oo galabta koox budhcad badeed ah ku qabtay Xeebta Lughaya	Blog